Agwaetiti Blue | Akụkọ Njem
Maria | | General, Oge ntụrụndụ
Foto | L35 Ndị ọkaibe
Emi odude ke district Carabanchel bụ nnukwu ụlọ ahịa na Madrid: Islazul. Shoppingzụ ahịa paradise maka ọtụtụ ndị Madrilenians n'isi obodo! Aha ya na-eme ka okike, mmiri, ìhè na agba. N'èzí, echiche ndị a na-agbakọta iji tụgharịa ya n'ime atụmatụ nke ụlọ ahụ, nke a na-enweta site na facade pụrụ iche na-acha anụnụ anụnụ nke na-egosi ebili mmiri nke agwaetiti mepere emepe. Mana n'ime ezigbo Iden na-echere gị gbasara ejiji, sinima na gastronomy. Kedu ihe ị na-eche izute ya? Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Islazul na Madrid.
1 Kedu ka Islazul dị?
2 Lọ ahịa na Islazul
3 Yelmo Cines na Islazul
4 Zlọ oriri na ọụ Islaụ Islazul
5 Ka esi aga Islazul?
5.1 Na ụgbọ ala
5.2 Site ụzọ ụgbọ oloko
5.3 Na bọs
Kedu ka Islazul dị?
Site na mpaghara nke 90.000 square mita gbasaa n'elu ala abụọ na ebe ụfọdụ na-adọba ụgbọala 4.100, a hibere Islazul n'April 23, 2008 dị ka ebe ịzụ ahịa emere maka ntụrụndụ nke ndị ọbịa ya ebe ha na-agaghị eji naanị ụbọchị ezumike nke ịzụ ahịa kama na-ekpori ndụ na sinima kacha mma ma na-a aụ ihe ọ drinkụ drinkụ na otu n’ime ọtụtụ ụlọ nri ọ nwere.
Nhazi nke ụlọ ahụ chọrọ ịkatọ ọdịdị ma na-ezo aka na aha e mere ya baptism: Islazul. Maka nke a, ọ nwere bioclimatic na avant-garde architecture solutions nke na-eme ka ike oriri dị n'okpuru ihe a na-ahụkarị n'ụdị ụlọ ọrụ a n'ụzọ emere iji lekọta gburugburu ebe obibi.
Ihu ya jupụtara na eriri, na-eme ka profaịlụ na-echetara okike na mmiri. Ìhè dịkwa mkpa na iwu nke Islazul ka ọ ghara inwe mmetụta nke gburugburu ebe obibi mechiri emechi nke a na-ahụ n'ọtụtụ ebe ịzụ ahịa, ọkachasị ndị okenye. Na Islazul enweghi nsogbu ọ bụla n'ihi na etinyere mkpuchi ETFE nke oge a, ezigbo ọkụ, nke na-enye ohere ka ọkụ ọkụ banye, na-ebugharị mmetụta nke oghere n'èzí, dị ka a ga - asị na anyị na - azụ ahịa n'okporo ámá mgbe anyị n'ezie nọ n'ọnọdụ nwere ọnọdụ ma kpuchie.
N'elu ala ọ bụla nke Islazul, e lebara anya n'ụzọ pụrụ iche banyere nkọwa nke ụgbọ okporo ígwè, mbara ala, ala ụlọ, pergolas, wdg. yana na theming na landscaping nke na-egwuri egwu dị oke mkpa na ụgbọ elu a na-ahụ anya. Iji mezuo ụzọ dị ike, e mepụtara ya ka ụlọ jiri nwayọ nwayọ na-achọpụta ya. Oghere ọ bụla dị iche na ihe ngosi ya bụ Plaza Islazul, ebe agwaetiti jupụtara na ahịhịa na-achịkọta mmụọ nke etiti ahụ: ebe ịzụ ahịa iji kpọte uche anyị.
Lọ ahịa na Islazul
Ala dị ebe enwere ọtụtụ ụlọ ahịa nwere ngụkọta nke 95, gụnyere: Primark, Parfois, Primor, Media Markt, Locker Foot, C&A, Alain Afflelou, Natura, Tenezis ma ọ bụ Zapshop, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. N’elu ala nke mbụ enwere ndị ọzọ dịka Bershka, H&M, Mango Marypaz, Pandora, Sfera, Misako ma ọ bụ Zara. N'elu ala nke abụọ, ọnụ ọgụgụ ahụ belatara gaa na ụlọ ahịa 4 ebe Bolini na cinemas pụtara, nke anyị ga-ekwu maka n'okpuru.
Yelmo Cines na Islazul
Thelọ ihe nkiri Yelmo Cines dị na ala nke abụọ nke ebe ịzụ ahịa Islazul, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ mpụta ihe nkiri sinima kachasị ọhụrụ na ihe nkiri kachasị mma. Ha nwere ime ụlọ iri na atọ ikiri ihe nkiri sinima kachasị mma nke nwere akara ngosi kachasị mma nke 13 dolby na nke kacha mma na ahịa.
Toga ihe nkiri anaghị adịkarị ọnụ ala, mana Yelmo Cines de Islazul echepụtala ọtụtụ nkwalite ndị a na-eme ugboro ugboro iji mee ka ọdịbendị nwee ike iru ndị niile na-ege ntị. Dịka ọmụmaatụ, site n'oge ruo n'oge Ememme Nkiri na-ewere ọnọdụ ebe ọnụahịa tiketi belata nke ukwuu na 3 euro. Ime ụlọ ndị a nwekwara ọhaneze "ụbọchị ndị nkiri" na Wednesde ọ bụla iji gaa sinima na -enwe ezigbo ego na ntinye.
Na Yelmo Cines Islazul ọ ga-ekwe omume ịme ụbọchị ọmụmụ ụmụaka. Echiche dị iche na ụmụaka ga-ahụ n'anya. Gụnyere tiketi nkiri, menu hotdog, ma ọ bụ menu popcorn maka nwa ọ bụla. Na mgbakwunye, ha ga-enweta onyinye ịtụnanya site na Yelmo Cines Islazul.
Clọ ihe nkiri sinima a nwere ebe a na-adọba ụgbọala n'efu ma nwee ike ịnweta ndị nwere nkwarụ.
Zlọ oriri na ọụ Islaụ Islazul
N'ime ụlọ ahịa Islazul dị na Madrid enwere ụlọ nri dịgasị iche iche ịhọrọ site na: nri ngwa ngwa (Burger King, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken ..), Italian (Ginos, La Tagliatella ..), Asia (Wok Garden, Ezushi ...), ndị America (Tony Roma, Foster's Hollywood, Ribs ...) na ọtụtụ ụlọ ahịa kọfị na ebe a na-ere ude ice cream ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri ụtọ dị ka Starbucks, Dunkin Donuts ma ọ bụ Llaollao, na ndị ọzọ
Ka esi aga Islazul?
M-40 (ọpụpụ 27 Via Lusitana)
M-40 (ọpụpụ 28)
M-45 (ụzọ ọpụpụ 2A)
A-42 (ụzọ ọpụpụ 6A)
R-5 (ụzọ ọpụpụ 27 Via Lusitana)
Site ụzọ ụgbọ oloko
Ogo La Peseta 1 km.
Ogologo San Francisco 1,2 km.
Est. Carabanchel Alto ke 1,7 km.
Nkwụsị na ọnụ ụzọ Islazul
Urban line 35 - Na-esote ọnụ ụzọ nnweta nke South (Ogige Vertical)
Urban line 118 - N'ebe ugwu na South ụzọ (Vertical Garden)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Agwaetiti Blue